Pasta miaraka amin'ny broccoli sy voatabia maina | ThermoRecipes
paty65 minitraOlona 4460 kaloria
Amin'ny horonan-tsary androany dia azonao atao ny mahita ny fomba mahandro paty ao amin'ny Thermomix ary esory ny rano amin'ny alàlan'ny harona, tsy esorina ny vera amin'ny vera.
Amin'ity tranga ity dia hataontsika amin'ny sasany izany floreta broccoli, izay hosaininay mialoha. Io rano avy amin'ny fandrahoana etona io no ho entinay handrahoana paty.
Fa ny tena manome tsiro ny lovia dia ny saosy izay homaninay amin'ny dingana voalohany, miaraka voatabia maina, anchovies ary jirika misy tongolo lay. Inona no tadiavinao matanjaka kokoa? Manampia sakay amin'io concoction io ary mankafy.
1 Pasta miaraka amin'ny broccoli sy voatabia maina
Pasta matsiro tokoa noho ny voatabia maina sy ny fahasalamana noho ny broccoli. Izy io dia voaomana amin'ny alàlan'ny Thermomix ihany.
Fotoana manontolo: 1h 5M
Fofon-trondro 4 ao anaty menaka
Voatabia maina 60 g
Rano 1200 g
Broccoli 300 g, amin'ny florets kely
320 g an'ny paty fohy
Napetrakay tao anaty vera ilay jirofo vita amin'ny tongolo lay, ireo fonosana tery ary ireo voatabia maina. Amin'ity dingana ity dia afaka manampy chilli isika. Izahay dia manao fandaharana 5 segondra, hafainganam-pandeha 7.
Ampidinintsika miaraka amin'ilay spatula izay sisa tavela amin'ny rindrin'ny vera.
Ampianay ny solika sy ny programa 5 minitra, 120º, hafainganana 1.
Napetrakay tao anaty lovia kely ny fangaro ary notehirizinay.
Raha tsy mila manasa ny vera izahay, dia ataontsika ao anatiny ny rano sy ny sira.
Eo anelanelan'ny kaonteneran'ny varoma sy ny fitoerany no zarainay ny florets broccoli.
Manarona ny varoma izahay ary mametraka azy eo amin'ny toerany. Izahay dia manao fandaharana 30 minitra, maripana varoma, hafainganana 1.
Esorinay tsara ny varoma ary hotehirizinay.
Apetrakay ao anaty vera ny paty (izay mbola misy rano) ary ataontsika programa ilay fotoana voalaza amin'ny fonosana paty, 100º, fihodina ankavia, hafainganam-pandrefesana.
Rehefa masaka dia esorinay ny rano amin'ny alàlan'ny harona, araka ny hita ao amin'ny horonantsary. Tsy mila izany rano izany intsony isika.
Ankehitriny dia ampianay ny fangaro ny voatabia maina sy ny tery izay efa nomaninay tany am-piandohana. Ary koa ny broccoli misy steamed. Izahay dia manao fandaharana 15 segondra, fihodinana havia, hafainganam-pandehan'ny sotro.
Mampifangaro ny zava-drehetra amin'ny spatula fotsiny izahay ary manompo avy hatrany.
Mampiasa voatabia maina izahay, tsy ampy rano. Izy ireo dia azo soloina voatabia maina tonga amin'ny menaka raha toa ka mihena ny habetsahan'ny menaka oliva izay miseho amin'ny resipeo.
Fanazavana fanampiny - Salady tsaramaso miaraka amin'ny vinaigrette anchovy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » General » Pasta miaraka amin'ny broccoli sy voatabia maina
Pie legioma mahazatra